Nghọta: Otu esi aga ọtụtụ B2B na-eduga na LinkedIn Sales Navigator | Martech Zone
LinkedIn bụ netwọkụ mmekọrịta kacha elu maka ndị ọkachamara B2B n'ụwa ma, enwere ike ịrụ ụka, ọwa kacha mma maka ndị na-ere ahịa B2B iji kesaa ma kwalite ọdịnaya. LinkedIn ugbu a nwere ihe karịrị ọkara ijeri ndị òtù, na-enwe ihe karịrị 60 nde agadi-ọkwa influencers. Eyịghe idụhe gị ọzọ ahịa bụ na LinkedIn… ọ bụ naanị okwu nke otú ị na-ahụ ha, jikọọ na ha, na-enye ozi zuru ezu na ha na-ahụ uru na ngwaahịa gị ma ọ bụ ọrụ.
Ndị nnọchi anya ahịa yana ọrụ netwọkụ mmekọrịta dị elu na-enweta ohere 45% karịa ahịa ma bụrụkwa 51% nwere ike kụọ oke ahịa ha.
Kedu ihe bụ ire ere?
Notice hụrụ ka m si ghara ịkpọ aha edemede a How to Drive More Leads with LinkedIn? Nke ahụ bụ n'ihi na njedebe nke LinkedIn na-eme ka ọ ghara ikwe omume maka ọkachamara ahịa iji mee ka ikpo okwu dị elu maka nyocha na ịchọpụta atụmanya ha na-esote. Nwere oke ozi ole ị nwere ike izipu kwa ọnwa, ụzọ ole ị nwere ike ịchekwa, ị nweghị ike ịchọpụta onye lere profaịlụ gị, ịnweghị ohere ọ bụla nwere ike ịchọ, yana ịnweghị ohere atụmanya n'èzí netwọk gị.
Nzọụkwụ 1: Debanye aha maka LinkedIn Sales Navigator
LinkedIn Ahịa Navigator na-enyere ndị ọrịre ahịa aka lekwasịrị ndị ziri ezi na ụlọ ọrụ anya site na itinye atụmanya na ndị na-eme mkpebi ziri ezi. Na LinkedIn Sales Navigator, ndị ọkachamara n'ahịa nwere ike ịnweta nghọta maka ire ere dị irè karị, nọrọ na ọkwa na ọkwa dị ugbu a na akaụntụ gị na ndu, wee nyere aka mee ka ọkpụkpọ oyi bụrụ mkparịta ụka dị ọkụ. Atụmatụ nke ikpo okwu gụnyere:
Advanced Lead na andlọ Ọrụ Search - ebumnuche ebumnuche ma ọ bụ ụlọ ọrụ nwere mpaghara ndị ọzọ, gụnyere okenye, ọrụ, ogo ụlọ ọrụ, ọdịdị ala, ụlọ ọrụ na ndị ọzọ.
Na-atụ aro - Onye na-ere ahịa ahịa ga-akwado ndị na-eme mkpebi dịka otu ụlọ ọrụ ahụ ma ịnwere ike ịnata ndị isi na desktọọpụ, mobile, ma ọ bụ site na email.
Mmekọrịta CRM - Jiri ohere nke nchekwa, nchekwa echekwara ma na - eduga na pipeline gị na CRM emelitere kwa ụbọchị.
Site na Ndị Na-ahụ Maka Ahịa, ị nwere ike ịdebe ndu na mmekọrịta dị adị, dịrị na kọntaktị na akaụntụ, wee jiri ikpo okwu na-atụ anya na ọ dị mfe.
Nweta Nnwale efu nke LinkedIn Sales Navigator
Kwụ na Buildkwụ 2: Mee Atụmatụ Gị Anya ma Dee Nzuzo Nzuzo Gị
Enwere okwu anyị ji na LinkedIn mgbe anyị jikọtara mmadụ ma were ozi ọnya, inbound sales ozugbo hit Akwụsịla. Amachaghị m onye wetara okwu ahụ, mana ọ zụrụ kpamkpam. Ọ dị ka imeghe ọnụ ụzọ gị ma onye na-ere ahịa wụbata n'ọnụ ụzọ ozugbo wee bido ire gị. M na-ekwu "gbalịa" n'ihi na mmadụ na-ere n'ezie enweghị ihe ọ bụla jikọrọ ya na pitching, ọ bụ maka iwulite mmekọrịta na inye uru.
Ndị otu na Cleverly bụ ndị ọkachamara n'ide akwụkwọ na-apụ apụ nke na-enweta nzaghachi n'ezie. Ha na-adụ ọdụ izere mmejọ atọ a:
Ejila anya: Zere okwu nzuzu nke ụlọ ọrụ ma gwa otu niche okwu, yabụ ị nwere ike iji atụmanya ndị na-atụgharị uche na ya. Niching ala na-eme ka ọnụọgụ nzaghachi.
Jiri mkpụmkpụ: Ihe ọ bụla karịrị ahịrịokwu 5-6 na-achọ ịdaba na LinkedIn, ọkachasị mgbe ị na-elele na ekwentị. Gwa onye ị ga - azụ ahịa otu ị ga - esi mee ka ndụ ha ka mma na obere okwu ka enwere ike. Ọtụtụ ozi Cleverly kachasị rụọ ọrụ bụ ahịrịokwu 1-3.
Nye Nkwado Nlekọta: A ọchịchọ nke mbụ echiche bụ na-ekweghị na ị. Yabụ, ọ dị oke nkpa ma aha ndị ahịa ama ama, kwupụta nsonaazụ akọwapụtara ị nwetara, ma ọ bụ tụọ aka na ọmụmụ ihe.
Ọ na-eji akọ ede usoro usoro doro anya, mkparịta ụka, ma baa uru maka olile anya gị.
Nke Atọ: Adala Mbà!
Mgbalị ahia ọ bụla na-achọ ọtụtụ mmetụ iji gbasaa na atụmanya ahụ. Atụmanya gị na-arụsi ọrụ ike, ha nwere ike ha enweghị usoro mmefu ego, ma ọ bụ ọ nwere ike ọbụghị na-eche maka ị nweta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa na ị ga-enwe usoro ị na-agbaso, na-eme nke ọma. Ozugbo ejikọrọ gị, atụmanya na-aghọ njikọ nke ogo 1, ma dịrị na ntanetị gị ruo mgbe ebighi ebi, yabụ ị na-azụlite ha site na nsonye na ọdịnaya.
Jiri amamihe zipụ ozi ntinye abụọ 2-5 na atụmanya, yabụ ha nwere ike ịnyekwu uru na usoro ahụ. Dịka ọmụmaatụ, mmetụ 3 na-abụkarị ọmụmụ ihe, na-egosi nsonaazụ gị.
Kwụ na Withkwụ 4: Jiri nlezianya lelee ọgbọ ndu gị
Ọ bụrụ na nke a na-ada ụda, ị nwere ike ịchụso iji Jiri nwayọ. Jiri amamihe nwere otu ya na ikpo okwu nke ha na netwọk na atụmanya gị na nnọchite gị wee pịa ndị ahụ na igbe mbata onye nnọchite ahịa gị ebe ha nwere ike ịrụ ọrụ iji mechie ha. Nke a na-enye ndị ahịa gị ohere ime ihe ha na-eme nke ọma well ire. Hapụ na-elekọta mmadụ na-ere ka Clever!
Dashboard Cleverly na-egosi gị ihe osise emelitere nke mkpọsa LinkedIn gị, gụnyere metrik dị ka Connection Rate, Reply Rate, Ọnụ ọgụgụ ịkpọ oku a zigara, na ọnụọgụ nke azịza.
Igwe okwu Cleverly jikọtara na LinkedIn iji nye gị ụzọ ka mma iji jikwaa, soro, ma zaghachi atụmanya - gụnyere ndebiri ịpị-na-eziga iji chekwaa oge ị zara.
Dashboard Cleverly na-arụ ọrụ dịka ụlọ LinkedIn CRM iji wuo atụmanya gị n'usoro ire ahịa. Họta ozi site na Mgbasa Ozi, Mkpado, Mmetụta Mmeghachi, Snoozed, ma ọ bụ Unread iji debe pipeline ahịa gị, ma echefu azịza ọzọ.
Lelee ozi kọntaktị maka atụmanya LinkedIn na akụkọ mkparịta ụka gị niile LinkedIn n'otu taabụ. Detuo ihe ọ bụla na-atụ anya ma gbakwunye akara ngosi omenala maka nkewa dị mfe na ọchụchọ. Ọzọkwa, hazie nzaghachi gị iji pụọ n'oge na ụbọchị ga - eme ka arụpụta arụsị dị elu.
Họta njikọ LinkedIn ọhụrụ site na aha, mkpọsa, mkpado, ọnọdụ, ụbọchị, email, na akara ekwentị. Mbupụ kọntaktị kọntaktị na budata njikọ njikọ dabere na mpaghara gị ịgbakwunye na CRM gị.
Ọ bụ ezie na Cleverly na-emepụta ozi mgbasa ozi LinkedIn gị, ị nwere ike ịmegharị na mmelite na-adabere na nzaghachi mkpọsa. Ọ bụrụ n’ịchọrọ, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị iji nyochaa ma nweta nzaghachi na ndezi ozi gị.
Zaa ajụjụ gị, mụta otu esi eji atụmatụ dashboard, ma nweta nghọta sitere na mkpọsa kachasị elu iji gbanwee atụmanya ndị ọzọ.
Cleverly nwere ikpo okwu na-enye gị foto emelitere nke mgbasa ozi LinkedIn gị, gụnyere metrics dị ka Connection Rate, Reply Rate, Ọnụ ọgụgụ ịkpọ oku a zigara, na ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke azaghachi. Oge ọ bụla ị nwetara azịza dị mma na igbe nnabata LinkedIn gị, Cleverly na-agwa gị ozugbo site na email.
Nweta A Ahụrụ Na-adịghị Etu
Ngosi: Abụ m mmekọ LinkedIn Ahịa Navigator na Jiri nwayọ.
Tags: b2batụmanya b2bb2b elekọta mmadụ na-erejiri amamiheolile anya oyichọta nduoziozi ịntanetịLinkedInNjikọ ụgbọ mmiri jikọtara ọnụNa-atụ anyana-elekọta mmadụ na-ere